Iimpawu, ukondla kunye nokuzala kwakhona kwe-triggerfish | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngeentlanzi ezimibalabala kakhulu apho kukho iintlobo ezahlukeneyo. Imalunga nayo intlanzi. Kukwaziwa ngegama le pejepuercos. Igama labo lenzululwazi yiBalistidae kwaye zifumaneka ikakhulu kulwandle lwaselwandle. Kweli nqaku siza kukuxelela malunga neempawu kunye nendlela yokuphila kwezi ntlanzi zinemibala.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge -fishfish? Qhubeka ufunda kuba sikuxelela yonke into.
2 Indawo yokuhlala kunye nokusasazwa kwehogfish
4 Ukutya kweTriggerfish
Ehlabathini lonke sinokufumana iintlobo ezingaphezu kwama-40 ze-triggerfish. Zonke zivela kusapho lweTetraodontiformes. Kwinkcazo yomzimba wabo sifumana i-oval kunye noxinzelelo oluxineneyo olubanceda ukuba bachwechwe ngcono emanzini. Intloko yazo inkulu ngobukhulu kwaye zinemihlathi esebenza ukonzakalisa ixhoba labo.
Amehlo amancinci ngobukhulu kwaye asemacaleni entloko. Oku kuyenza ibe yinto enomdla, kuba ukuba unamehlo kuloo ndawo unokuba nemibono eyahlukileyo kunezinye iintlanzi oziqhelileyo.
Inomqolo ongasemva oneentsiba ezintathu ezenza iigrooves emzimbeni wayo. Iimpiko zidibene nomqolo ongasemva kwaye siyabulela koku kukudada okuhle. Umzimba wakho uyilwe ukwazi ukudada kuzo zombini isantya esisezantsi nesiphezulu.
Ulusu luyabonakala kwaye lukhuni. Izazinzulu ziyangqina ukuba ubushushu besikhumba busebenza njengekhaka lokukhusela kwizilwanyane ezithile ezilingana nobukhulu bazo. Ngokucacileyo obu bunzima abunanto yakwenza nezilwanyana ezinkulu ezifana ne ukrebe omhlophe.
Ubude beentlanzi abudluli kwi-50 cm. Kuyenzeka ukuba ufumane isampuli eyodwa ukuya kuthi ga kwimitha enye ubude.
Indawo yokuhlala kunye nokusasazwa kwehogfish
Ezi ntlanzi zifumaneka kwiilwandlekazi nakwiilwandlekazi kwihlabathi liphela. Kumanzi akweleenjiko kulapho kukho intabalala khona kuba bafuna amaqondo obushushu aphezulu okuphuhla kwabantu.
Ngokuphathelele indawo yokuhlala, eyona ndawo yokuhlala apho banokuzala khona kwaye bahlale kufutshane nemifula yeekorale. Zihlala zisebenzisa imingxunya efanayo okanye amatye akufutshane nazo ukuzimela ebusuku kwaye ziqinisekise ukuba azibanjwa ngamarhamncwa.
Uninzi lwezi ntlanzi bodwa kwaye umsebenzi wabo ngowokugqibela. Ebusuku bazimela emingxunyeni ethile yamatye nakufutshane neekorale ukuze bakwazi ukubaleka kumarhamncwa. Ezinye iintlobo ze -fishfish ziba ndlongondlongo xa zikwixesha lokuzalisa kuba zinendawo kwaye ziyazikhusela kunye namantshontsho azo.
Xa kuziwa ekukhuseleni indlwane, bayakwazi ukwenza nantoni na. Kukho iimeko apho ihlasele abantu ababedilika kwindawo engqongileyo. Zizona ntlanzi zommandla kakhulu. Ekuboneni kokuqala banokubonakala bedada ngokuzolileyo kwaye babonakala bethobekile. Abafazi banembonakalo yeengcwangu kunamadoda kwaye baya kuhlasela iintlanzi ezinkulu ukukhusela amantshontsho abo. Aboyiki kwanto.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, abanye abantu baye bahlaselwa kwaye balunywa ziimodeli ezithile ze-femalefishfish. Aba bantu basetyhini bajonga nabani na kufutshane njengesisongelo kubantwana babo.
Ihogfish inokutya okwahlukeneyo. Ukutya okuphambili kukutya Iinyama zeentlobo ezahlukeneyo ezinje ngeshrimp, iimollusks, iintshulube, oononkala kunye neeurchins zaselwandle. Yindidi edlayo esebenzisa amaphiko azo ukumba imingxunya ebanceda ukuba bafumane ukutya.
Sebenzisa amanzi agciniweyo emlonyeni wawo ukukhupha isanti eseleyo enokuhlala emingxunyeni kwaye ukutya kube kufutshane. Ngokwesiqhelo badla ukutya okuninzi emini ukuchitha ubusuku bephumle kunye neentsuku ezininzi bengatyanga. Bakwengeza ukutya kwabo kunye nezinye izityalo ezide kunye nezinye izityalo ezisezantsi kolwandle.
Ezinye iintlobo ze-triggerfish bondla kwiiplankton abazifumanayo. Ukubamba ixhoba labo kakuhle bemba umngxuma onzulu kwimizuzu embalwa ukuze bavule ngakumbi. Rhoqo kunokuqwalaselwa ukuba zikhona njani ezinye iintlobo zeentlanzi ezinceda i-triggerfish ukuba ikusebenzise ukutya ekubonelelayo kwaye isebenze njengabahlwayeli besitya intsalela. Aba bahlaziyi basinda ngenxa yokubambisa okwenziwe yi hogfish.
Ngokwesiqhelo sikhankanyile ukuba ziintlanzi ezizodwa. Nangona kunjalo, banesithembu. Oko kukuthi, abesilisa banokuba nabasetyhini abaninzi ngaxeshanye kwaye ngokuchaseneyo. ukuzala akukho luhlobo lokuthandana ngaphambi kwesiqhelo njengoko kuhlala kunjalo kwezinye iintlobo zentlanzi. Abafazi, bendawo kakhulu, bakhetha iqabane labo kwangoko.
Nje ukuba ukwenzeka kwenzeke, owasetyhini uyahamba ayokubeka amaqanda akhe kwindawo apho indoda ikhula khona ubomi bayo. Yile ndlela ashiya ngayo imishini ukuba ayikhathalele de bakhule. Esi sizathu sokuba kutheni iinkunzi zikwindawo, njengoko zinomsebenzi wokukhathalela abantwana bazo. Xa iintlanzi zichunyisiwe zincinci ngobukhulu kwaye zibuthathaka. Ukuthintela umonakalo onokubakho kwi-surf eyomeleleyo, abazali kufuneka babancede bafunde ukudada kakuhle.
Ibhinqa lelona liphetheyo ukujongana nendawo apho kugxothiwe khona amaqanda, kugxothwa amarhamncwa anokubakho. Ndiyabulela kolu khuselo, i-fry inokukhula kwangoko. Kumaqabane ayo, Iinkunzi zona zihamba umgama omde ukuya kuthwala amantshontsho azo kwaye ziyeke zifunde ukudada nokuzingela.
Kukho iintlobo ezithile zentlanzi apho ukuchumisa kunye nokugxothwa kwamaqanda kwenzeka kwangolo suku lunye. Kweminye, bazalwa kwangolo suku luphela. Oku kubenza babe nenqanaba eliphezulu lokuzala kunye nokunyuka okubonakalayo kubantu babo.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi lukunceda ukuba wazi ngakumbi nge-triggerfish.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » I-Triggerfish
Intlanzi yaseMarlin (Hook weevil)